सिक्किमका युवाहरुले खेलकूदलाई अब पेशाको रुपमा लिनुपर्छ: मुख्यमन्त्री - The Sikkim Chronicle
सिक्किमका युवाहरुले खेलकूदलाई अब पेशाको रुपमा लिनुपर्छ: मुख्यमन्त्री
गान्तोक, 30 अगस्त: राष्ट्रीय खेल दिवसको उपलक्ष्यमा राज्य सरकारले खेलकूद सम्बन्धी विभिन्न घोषणाहरु गरेको छ। खेलकूदमा संलग्न व्यक्तिहरुको निम्ति अब सिक्किमका सरकारी नोकरीहरुमा आरक्षण2प्रतिशतदेखि बढाएर5प्रतिशत गरिने भनिएको छ। खेल दिवसको उपलक्ष्यमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले सो कुरा बताएका हुन्। नाम्चीस्थित भाइचुङ स्टेडियमको निर्माण कार्य यसै वर्षको मार्च वा […] The post सिक्किमका युवाहरुले खेलकूदलाई अब पेशाको रुपमा लिनुपर्छ: मुख्यमन्त्री appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Aug 29, 2020 - 13:18
गान्तोक, 30 अगस्त: राष्ट्रीय खेल दिवसको उपलक्ष्यमा राज्य सरकारले खेलकूद सम्बन्धी विभिन्न घोषणाहरु गरेको छ। खेलकूदमा संलग्न व्यक्तिहरुको निम्ति अब सिक्किमका सरकारी नोकरीहरुमा आरक्षण2प्रतिशतदेखि बढाएर5प्रतिशत गरिने भनिएको छ। खेल दिवसको उपलक्ष्यमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले सो कुरा बताएका हुन्।
नाम्चीस्थित भाइचुङ स्टेडियमको निर्माण कार्य यसै वर्षको मार्च वा अप्रेल महिनामा समापन गरी उदघाटन गर्ने लक्ष्य रहेता पनि महामारीको कारण त्यसो हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीले बताए। सबै कोभिड नियमहरुको पालना गर्दै त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्णलाई ल्याएर रहल कार्यको थालनी शीघ्र गरी आगामी स्वर्ण पदक प्रतियोगिता अगावै समापन गरिने लक्ष्य राखेको तिनले बताए। यसैगरी लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको क्योङसा खेल मैदानको पनि निर्माण कार्य शीघ्र समाप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री गोलेले बताए। यसको निम्ति धनराशी छुट्याइएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराए।
गान्तोकको खेलगाउँमा स्वीमिङ पूलको निर्माण गरेर तैराकीहरुलाई प्रशिक्षणको निम्ति उपलब्ध गराउने जानकारी मुख्यमन्त्री गोलेले दिए। सो क्षेत्रलाई पुलिसबाट लिएर खेलकुद विभागलाई दिइसकिएको तिनले थप बताए। राज्यमा धेरै प्रतिभावान तैराकीहरु रहेको अनि उनीहरुलाई जस्तै पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनको निम्ति प्रशिक्षण एवं अभ्यासको हेतु पूर्वाधार तैयार गरिने जानकारी मुख्यमन्त्रीले गराएका हुन्। जोरथाङ खेल मैदानको पनि विकास गरिने जानकारी तिनले थप गराए।
खेल दिवसको उपलक्ष्यमा राज्य तथा देशका सम्पूर्ण खेलाड़ीहरुलाई याद गर्दै तिनले अब उसो राज्यमा सम्पूर्ण प्रतिभावान खेलाड़ीहरुलाई अघि आएर खेललाई निसंकोच आफ्नो पेशाको रुपमा लिने आवहान गरे। सरकारको तर्फबाट जस्तोसुकै सहायता खेल विकासको निम्ति चाहिए यसको निम्ति तिनको सरकार सँधै प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए।
The post सिक्किमका युवाहरुले खेलकूदलाई अब पेशाको रुपमा लिनुपर्छ: मुख्यमन्त्री appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Bimal Thapa Aug 16, 20200662
SC Bureau Nov 28, 20200722
SC Desk Jun 18, 20200692
admin Sep 2, 20200641
SC Desk Nov 4, 202001081
SC Desk Oct 25, 20200400
admin Feb 23, 20200399